सेम टु यु मेराे टेड्डी गर्ल 😍 - प्रभात खबर
सेम टु यु मेराे टेड्डी गर्ल 😍
प्रभात खबर २८ माघ २०७७, बुधबार १२:२८ मा प्रकाशित
इलामबाट फर्किने तय भयाे । किनकि हामी इलाममा हुँदा धेरैले फाेन र म्यासेन्जरबाट हाम्राे सम्बन्धकाे बारेमा साेधिसकेका थिए । उनले सजिलै उत्तर दिइरहेकी थिईन भने म भने केही असहजताबाट गुज्रिएको थिए । विहानै विहानै उनकाे ममीकाे कल अायाे । तपाईहरु कहिल्यै अाउनुहुने हाे ? भनेर साेध्नु भयाे । अाज अाउँछाै , यताकाे काम सकिसकेकाे छ । उनकाे बारेमा साेध्नुभयाे । मैले निदाइरहेकी छिन् भने तर पनि फाेन दिन भन्नुभयाे । मैले उनलाई उठाए । सानी , ओइ सानी तेराे फाेन छ है उठ भने । उनले अाँखा चिम्लिएकै अवस्थामा फाेन लिइन। उनकाे हातकाट फाेन खस्याे । मैले लाउडस्पिकर गरेर उनकाे सिरानी छेउमा राखिदिए ।
उठ्नुपर्दैन अल्छी , अाफुसंगै उसलाई पनि अल्छी बनाउन लागिस् । उताबाट कडा स्वरमा अावाज अाए पछि उनकाे निद्रा पूरा खुल्याे । उनले श्रीमान नमस्कार गरिन्। उनकाे याे अभिवादन मलाई कहिल्यै मन परेन । उनले राती सुताई नै ढिलाे भयाे त के गर्नु भनिन्। कति बेला अाउँछस भनेर साेध्नुभयाे । अाज अाउने कुरा गर्नहुँदै थियाे बाबाले । म साेधेर भन्छु । ल ल चाँडै अाउनु भन्न नपाउदै उनले फाेन राख्छु नि ममी भनिन । ल ल माेज गर भनेर फाेन काट्नुभयाे । याे सम्बाद म उभिएर सुन्दै थिए । उनले मलाई हेरेपछि लजाइन् । म निस्कन लागेकाे देखेर लजालु स्वरमा बाबा एक छिन बस्नु न भनिन । म छेउमा बसे ।
बाबा तपाईले भनेकाे जस्तै चाडै बिहे गर्नुपर्छ है , विहान- विहान कसैले डिस्टर्व त गर्दैन नि । मैले यस विषयमा उतै घर गएर साेचाैला भने ।
हामी विहान इलाम बजारमा ताताे थुक्पा खाएर निस्कियाै। शक्ति र प्रकाश सरलाई उतै छाडेर अस्मि , सानी र म मात्रै भयाै फर्किनेमा । गाडी इलाम बजार बाट बाहिरिदा हामीले इलाममा हाम्राे प्रेमकाे अभिन्न र कहिले भुल्नै नसकिने पलहरु छाेडेर अायाै । इलामकाे चियाबारी, भालुढुङा, डाडाहरुलाई साक्षी राखेर असिम प्रेम साटेका थियाै ।
हामी चढेकाे सुमाेमा सिलिगुडीका एक डेकाेरेसन डिजाइनर पनि थिए । हाम्राे चिनजान भयाे । निकै मिलनसार उहाँ संग कन्याममा निकै तस्बिरहरू खिच्याै । हामीलाई फाेटाे खिचेकाे देखेर एक जना बृद्ध महिलाले कति राम्राे जाेडी । कहिले बिहे गरेका तिमीहरूले भने। साेध्नभयाे । मैले हाम्राे बिहे हुन लागेकाे भन्न नपाउदै हाम्राे बिहे बैशाखमा हुँदैछ अामा भनिन् ।
कति चाडै जवाफ दिन थालेकी तिमी त ? भनेर साेधे । उनले केही बाेलिनन् ।बेलुका इटहरी पुगेर उनलाई एउटा टेड्डी बियर किनेर हातमा राखिदिए । उनी निकै खुशी भइन् । उनले छुट्टिने बेलामा म निकै खुशी छु भनेर बाबा गालमा चुम्बन गरेर गइन्। करिव पाँच मिनेट पछि कल गरिन ।
बाबा ह्यापी टेड्डी डे ! भनिन ।